::: Somalitalk.com Online Community :: MAANSADA DHAKAFAAR :::
MAANSADII - DHAKAFAAR !
Curiye: Inj. Maxamed Cali Cibaar Delft, Holland
Maansada Dhakafaar waxay soo baxday dhamaadkii bishii maarso 2005-ta, waxaana curiyay Inj. Maxamed Cali Cibaar. Maansadu waxay ka warramaysaa natiijadii ka soo baxaday shirkii muddada sanada ah loo fadhiyay Kiinya iyo waxa ay soo kordhiyeen dagaal-oogeyaashii halkaas isku soo caleemo saaray.
Maansadu waxay dabasocotaa kuna hal-qabsanaysaa Maansadii ka horraysay ee Dhalanteed oo soo baxday bishii maarso 2004-tii iyo Maansadii Dhibaad ee uu curiyay Maxamed-Keyse oo iyaduna soo baxaday dabayaqadii sanadkii 2003-dii. Labadan maanso waxay ka mid yihiin suugaanta faraha badan ee ay hal-abuurada Soomaaliyeed uga digeen cawaaqibxumida ay yeelan karto in dugaag xoolo lagu aamino!.
Dhakafaar waxay wax ka tilmaamaysa hab-dhaqanka qaabka daran ee Soomaalida maanta . Waxay ka digaysaa khatarta culus ee ku soo fool leh ummaddeenna, waxayna ku baaqaysaa in aan la isku dhiibin oo laga dhiidhiyo dhagarta cadowga ummadda iyo dagaal-oogeyaasha uu ku adeegtaa ay dadkeenna, diinteenna iyo deegaankeennaba la damacsanyihiin.
Keysow Dhibaad iyo
Huryo dhagas sirteedii
Tiri dhayladuu helay
Lafihii xitaa dhuux!
Dharaartii la shuufee
Dhaygaggii la yaabeey
Dhug yiraahde riyihii
In dhagari kashifantoo
Dhabtii ay caddaataan
Dhiirranow u haystaye
Illeyn qaar dhagweynoon
Illaa cunaha lagu dhago
Waxba dhaadin baa badan!
Wixii gabayo dhaadheer
Dhalliil iyo canaan iyo
Lagu dheehay waanada
Dhalanteed digniin culus
Dhabtii waxay abbaartiyo
Amiin sawirraduu dhigay
Dadku inuu dhagaystoo
Ka dhergaan u haystaye
Illayn badidood maba dhicin
Dhawaaqiina lama garan
lama dhugan sarbeebtii !
Abaar lagu dhamaadoo
Cudurro isku dhafan iyo
Gaajadu ay dheertahay
Mar haddey dhadhamiyeen
Anaa dhalada hebelow
Iyo dhumuc anaa weyn
Xumaan inay dhammaatooy
Dhimeen baan u hasytaye
Illayn dheeshii waa weli.
Dhoofkiyo is dhiibkiyo
Ehel kala dhantaalmooy
Kala dhufte duruufuhu
Waxii qoysas kala dhumay
Ama ubad la dhalanrogay
Kaniisado u dhuuntoo
Diintiiba dhinac maray.
Wixii oday dhirbaaxiyo
Dhabannaano xoog badan
Dhaaxa ciil huqleeyooy
Dhenged sida dameerihi
Wixii Lala dhacaayoo
Dhacaan feerihii galay.
Rag wixii dhufaanmoo
Dubbihii ku dhacay iyo
Qabatadi dhab lagu yiri
Ama loo dhammeeyoo
Seey yihiin dhilmaanyaba
Noloshii la dhaafiyay!
Dumar caawa dhali raba
Waxay silic dhaxeenoo
Meel dhilqe ku badanyahay
Dhagax cuni jirkoodiyo
Xabsiyada dhex jiifteen.
Dharkooy qoysay oohini
Wixii dhibban itaal daran
Dhallaankii ay dihatoo
Dhiiggeed ka beermoo
Ilaahay u dhiibiyo
Kii ku koray dhabteedii
Ka dheerow la yiriyoo
Hooyo ubadkii laga dhacay
Ay dhamaatay murugada.
Dhibaatadaa xanuunka leh
Iyo boqol kaloo dheer
Mar hadday dhadhamiyeen
Kibir inuu dhamaadoo
La dhimmaan u hasytaye
Shacabkaan dhugta lahayn
Illeyn waa gawaan dhaba
Dhadhaab aad u adag iyo
Dhul aan khayrku kuba duxin.
Wacad dhowriddii iyo
Kuwuu sahal ku dhaafoon
Waxba meel ka dhigan iyo
Duulkan dhimirki laga galay
Waa qaar dhashoodii
Dhuunigoodi laga horo
Oo dhibic caddaysiyo
Dhalo goror ku jira iyo
Wax carruurtu dhuuqdiyo
Shay kastaba dhunjinayoo
Aan dhururuq reebayn.
Wax kastoo dhibaato ah
Waa duul ku dhaashada
Marba tuuggii dhacayoo
Khiyaanada ku dheer bay
Dhulka maal waxow yaal
Ammaanada u dhiibtaan.
Fulay dhabqiya nabaddiyo
Dhaadhaanka nacaska ah
Garashadu ka dhimmantahay
Naxariis ka dheertahay
Xishoodkiina meel dhigay
Dhuuntu miday dalooshoo
Dhul fog laga hagaayiyo
Midka miinadow dhiga
Waaba kuway ku dhaataan.
Dhiig-miirad baas iyo
Dhulka iyo dadkoodaba
Ma dhintoow yiraahdaan
Xilalkana ku dhoobaan.
Kan dantooda dhowree
Dhexdu ay u xirantee
U dhimriya bulshada iyo
Waa ummad ka dhiifoon
Geesigay dhaleen iyo
Caaqillada dhifka ahee
Laga wada dhursugayoo
Ka dhooqaysa himilada.
Diktoor Cilmi dhammeeyiyo
Dugsi sheekha dhigayee
Xadiis laga dhagaystiyo
Kan qurbaha dhabacanee
Cayrta loo dhibcinayiyo
Kuwa howd dhex joogee
Badi wax isma dhaammaan
Qabiilkaa u dhaayo ah
Dhabna waxay u haystaan
Hadday saaka dhaafaan
Cirkoo dhinac dumayiyo
Dhimashaba in ay tahay !!
Qoom Ilaah ka dheeriyo
Dhiil agoon nin heensaday
Dhacay boqol jir waayeel
Ummul dhiig ka da'ayiyo
Haddaan weyne dhaafayn
In ciqaab ku dheelmado
Cilmi baa dhigaayee
Dhoollatus qabiil iyo
Qabyaaladdii dharka la'ayd
Waa tan dhabannahaystiyo
Xaggee loo dhaqaaqaa?!
Middaan inaysan nagu dhicin
Horay uga dhawaajiyay
Adna aad Dhibaad iyo
Ku tilmaantay dhaxal-gala
Dharka aadmi qaatee
Intuu dhaartay beenbeen
Yiri Aamin igu dhaha
Xoolo kii u dhiibtiyo
Doqon waa dhaliishiye
Hashii dhool ahayd iyo
Hadduu dhiig qulqulayoo
Dhaawacoodu halis yahay
Isu wada dhawaaqeen
Alla wuu ku dhagay iyo
Ka dhigaay ha joogtee
Dhiilaha la culayiyo
Dhaay maalid sugid iyo
Ma dhab baa widaayow
Mise waan dhadhabayaa?!
Waa dhiillo foolxume
In gafane dhulkeennii
Dhaxalakiisa rabo oo
Dhinac uu ka duso iyo
Inaan soo dhaweynoon
Ku ximbaarno dhabarkoon
Dhaaminno u naga rabo
Shaambad lagu dhajinayuu
Yahay ruux dhib kale wada
Ma dhab baa widaayoow
Mise waan dhadhabayaa?
Intaan dheegtay buug iyo
Intaan dhego ku kaydiyay
Waa sheeko ii dhiman
Dhafandhaaf mas'alo iyo
Imtixaan dhibkiis loo
Dhiraandhirin innaga raba.
Markuu xaalku dhii tago
Rabbow talo dhammanteed
Kuu dhiibnay adigee
Dhanka khayrka noo door
Shaydaanna naga dhowr
Dadaal aad u dheer iyo
Duco waa ma-dhaafaan
Midna saaxib aan dhaho:
Mar haddii an dhoof iyo
Dhisme leysku meershiyo
Dhaqtar iyo quraan iyo
Dhereg iyo ladnaan iyo
Hanti meel la dhoobaba
Malag looga dheeraan
Shaqo dhididdayaa iyo
Xaaraan ka dheregtaa
Dhuunigii laguu qoray
Mar haddii uu dhiganyahay
Dhaandhaan kas daran iyo
Dhabcaal aan wax quurayn
Sow inaan dhaqaaqnoon
Dhiidhinnaa walaal oo
Arrinkeennu kuma dhama?!
Nacab noo dhakanayoo
Ha dhalaalsho ciridkoo
Dhiqdhiq qosol ha siiyoo
Intuu dhakal mariid iyo
Ku soo qoosho dhuunkaal
Dhanaan iyo macaan iyo
Ha ku sheego dheefoo
Ha yiraahdo waa dhabaq!
Mid wax dhiitinaayiyo
Dhangax iyo ma quusyito
Ma-dhimriye habaar qaba
Dhoombaca ha ababshoo
Intuu dhiinka darajada
Dhal-iblays u wada xiro
Ha dhoobdhoobo doqomada!
Inkastuu dhib jira oo
Dhaawac culusi nagu yaal
Dhaar waxaan maraynaa
Dhufaysyada ka bixinoo
Aan dhasheenna sahay iyo
Kaydkii u dhiibnoon
Inkastuu dhib jiro oo
Kuwa nala dhiggaa iyo
Haddaan qayrkeen dhaafayn
Dhinac inaan ka joognoon
Marna hoos naloo dhugan.
Inkastoo dhib jiro oo
Inaan dhidar hamuun qaba
Iyo cadowga dhogorta leh
Dhiirri soo bereeryaa
Dhulkayaga intuu dago
Noogu seexan dhacadiid.
Anigoon ku dheeraan
Dhago ha ka furaysteen
Ama ha na dhageysteen
Bal in waajib naga dhaco
Xaqiiqada dhabta ah iyo
Aan dardaaran kale dhaho.
Kala garan wax dheef laay
Hurdo laguma dhaanshee
Haddaan dowlis dheer iyo
Wadaan biyaha soo dhurin
Dhallaankoo harraad qaba
Meel aan dhibici ool iyo
How tilmaamin dhalanteed!
Bulashayahay dhabtii iyo
Kala garan wax dheelaay
Haddaan dhoobo ciidiyo
Dhexda biro ku laabnayn
Dhista booc u tahay tiir
Dhushug bow dambaysee
Dhakadiisa how xilan
Gogoshana ha hoos dhigan.
Dhambaalkaygu wuxu yahay
Xaalkan halis u dhaadhacay
Haddaan diinta dhidibnoon
U dhawaanno Waynaha
Dhayiddiisu waa sahal
Waa dhowyahay xalkiisuna
Waxa uuse dheeryahay
Markaan eelka kii dhigay
Na dhaqtari ku Leenahay !!
Aanan kuu dhameeyee
Waa dhibco la qorayoo
Dhito weeye taariikh
Dhuqdhuq iyo is-yeelyeel
Kii ruwaayad dhigayiyo
Dhexdu ay u xirantahay
La iskuma dhafaayoo
Diiwaanno dhigan buu
Ninba meel ka dhacayaa
Aakhirana sii dhiman.
Rabbi ha ina dhowree
Axdi waxa inoo dhigan
Alloo loo dhowaadiyo
Xaqoo lagu dhegaa iyo
Dhimashana koley tahay
Runta inan la dhinac marin
Dhaabaddeennu waa taas.
Wixii falcelis ah ku soo hagaaji
Halakaan ka aqriso maansadii DHALANTEED
Halkan ka aqriso maansadii DHIBAAD
Faafin: SomaliTalk.com | July 4, 2005